Maitiro Ekugadzira Kupinda Kwenguva pfupi kuWordPress Via A Direct Link | Martech Zone
Maitiro Ekugadzira Kupinda Kwenguva pfupi kuWordPress Via A Direct Link
Ndakashanda mumazana evatengi neWordPress, kugadzira madingindira, plugins, kubatanidza, nezvimwewo. Kazhinji, dingindira rakaedzwa uye rakaedzwa kana plugin ine chiyero chikuru uye mukurumbira unoshanda zvisina musono pane yevatengi saiti. Asi, nguva zhinji, plugin kana dingindira rinokanda bhagi kana kutotora pasi saiti zvachose.
Vhiki rino, ini ndanga ndiine nyaya pane yedu saiti yekambani uko kugadzirisa iyo Elementor Plugin (iyo yandinokurudzira zvikuru semuvaki wepeji yekuona) yakatanga maitiro ekugadzirisa zvirongwa mu database. Maitiro akatanga asi haana kupera… uye kana ndikadzvanya pairi kuti ndipedze nemaoko, saiti yangu yaizokanganisa.
Ndakabata timu yerutsigiro kuElementor sezvo pakanga pasina zvandaigona kuita kugadzirisa dambudziko. Ivo vakakurumidza kupindura uye vakakumbira kuwana kwenguva pfupi saiti nemvumo yekutonga uye vakakurudzira iyo Kwechinguva Kupinda Pasina Password plugin, plugin yakagadzirwa ne Chengeta Apps chikwata.
Kwechinguva Kupinda Pasina Pasiwedhi WordPress Plugin
Mukati maminetsi, ndakarodha nekumisikidza plugin, uye ndaive neiyo yakananga URL yekupinda mutikiti yakavapa mukana wekuwana wavaida. Zvakanakisa pane zvese, zvaisada kunyoreswa padivi pavo zvachose.
Iyi iplugin inoshamisa nekuti haidi kuti udzoke uye udzime account yawakagadzira, zvichiita kuti iwe uve panjodzi kune boka reakaundi asina kushandiswa anogona kunge aine mapassword ari nyore kubira.
Iyo plugin ndiyo zvese zvaunoda, ichipa zvinotevera maficha:
Gadzira unlimited temporary logins
Gadzira kwenguva pfupi logins chero basa
Hapana username nepassword zvinodiwa. Login with just a simple link
Set account kupera. Saka, mushandisi wenguva pfupi haakwanise kupinda mushure mekupera kwenguva
Yakasiyana-siyana yekupedza nguva sarudzo sezuva rimwe, vhiki imwe, mwedzi mumwe, uye zvimwe zvakawanda. Uyewo, sarudza zuva retsika
Dzorera zvakare mushandisi kune chaiyo peji mushure mekupinda
Gadza mutauro kumushandisi wenguva pfupi
Ona yekupedzisira kupinda munguva yemushandisi wenguva pfupi
ona kangani mushandisi wechinguvana akawana kuseta kwako
Ndiri kufadzwa neplugin zvekuti ndawedzera kune yedu runyorwa rwe Akanakisa eWordPress plugins kune bhizinesi rako saiti.
Kwechinguva Kupinda Pasina Password Plugin
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yangu yakabatana link ye Elementor munyaya ino.
Tags: gadzira login linkgadzira login kwenguva pfupikupinda kunoperasei kutilogin kuperachitoro maappkugadzirisa wordpressmushandisi kupindaWordPresswordpress loginwordpress kuchengetedzeka
Verenga kana Kubvunza Great Circle Distance Pakati pePoints of Latitude neLongitude Uchishandisa Iyo Haversine Formula (PHP, Python, MySQL, MSSQL Mienzaniso)